Nhau, 01 Mbudzi 2017
Chitatu 1 Mbudzi 2017
ZEC Inoti Mazita eVakanyoresa Kuvhota Akachengetedzeka
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Amai Rita Makarau, vanoti vakagadzirira zvizere kuti mazita evanhu vari kunyoresa kuvhota achengetedzwe.
Dare Rinodzosera VaKombayi Kuti Vaite Basa Ravo saMeya weGweru
Dare repamusoro rakatara mutongo wekuti vaimbove meya weGweru, VaHamutendi Kombayi, nevaive mutevedzeri wavo, VaKenneth Sithole, vadzoke pabasa.
America Yoferefeta Kuurayiwa kweVanhu Vasere muNew York neAnopfurikidzwa Mwero Achitsigira ISIS
Vanhu vasere vakaurayiwa vamwe gumi nevatatu vakakuvara mushure mekunge mumwe murume anofungidzirwa kuti anotsigira vanopfurikidza mwero veIslamic State, kana kuti ISIS, avadhuma nemotokari muguta reNew York.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Mbudzi 01, 2017
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vanoti vanoda kuti mutongo werufu udzoke kuranga vanoponda nevanobata chibharo. VaMugabe vange vachiviga gamba renyika VaDon Muvuti kumarinda eHoroes Acre muHarare.
Chizvarwa cheZimbabwe, VaTembo, Votarisira kuKunda muSarudzo dzaMeya weAllentown muPennsylvania
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kukwikwidza musarudzo dzameya weguta reAllentown mudunhu re Pennyslvania muAmerica, VaSolomon Tembo, vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo dziri kuitwa musi wa 7 Mbudzi.
IMF Inoti Hupfumi hweZimbabwe Huchaderera Kunge Ine Hondo
Sangano reInternational Monetary Fund nemusi weMuvhuro rakaburitsa gwaro rinoratidza kuti zvinhu munyaya dzezvehupfumi zvaenda kumawere. Gwaro remamiro ehupfumi iri rakaparurwa muHarare
Machechi Anonyorerana Chibvumirano Chekuti Ashande Pamwe
VeRoman Catholic Church pamwe nedzisvondo dziri musangano reZimbabwe Council of Churches neMuvhuro manheru vakanyorerana chibvumirano chekunamata nekushanda pamwe chete mushure mekunge dzisvondo idzi dzapatsanuka kubva muCatholic Church makore mazana mashanu apfuura.
Apo chikamu chechipiri chekunyoresa kuvhota chapinda muzuva rechitatu kuMasvingo, vanorarama nehurema vari kuchema chema kuti nzvimbo dzekunyoresa hadzina zvikwanisiro zvekuti vasvike uye vanyorese.
Vanotengesera Mumigwagwa Vodyira Hurumende Marasha
Vatengesi vemumigwagwa nevanoita mabasa emaoko nhasi vaenderera mberi nemusangano wavo pachechi yeAnglican muHarare zvisinei nechaunga chemapurisa vamwe vacho vanga vakapakata pfuti avo vamboda kurambidza vanhu kuita musangano uyu.